खैलावैला Google सोसल नेटवर्क Google Me को ! [Friday Tech]
इन्टरनेट का ट्विटर, ब्लग र वेवसाइट मा फैलिएको कुरालाई पत्याउने हो भने, गुगल ले फेसबुक को प्रतिस्पर्धि को रुपमा सोसल नेटवर्क साइट ‘गुगल मी’ निर्माण गरिरहेको छ ।
हुन त अहिले सम्म का गुगल का सोसल नेटवर्क का प्रयासहरु विफल भइसकेका छन् । तर पनि फेसबुक प्रयोगकर्ताहरु चाहन्छन्, गुगल को सोसल नेटवर्क तर्फ को कदम ले केही उपलब्धि हासिल गरोस् ।
पहिले त ईन्टरनेट मा चलेको हल्ला तिर नै जाउँ ! सोसल नेटवर्क ‘डिग’ का फाउन्डर केभिन रोज ले केही दिन अघि ट्विटर मा लेखेका थिए, ‘फेसबुक सँग प्रतिस्पर्धा गर्न, गुगल मी आउँदैछ” । अत्यन्तै विश्वस्त स्रोत बाट आएको कुरा भन्दै केभिन रोज ले ट्विट गरेपछि, इन्टरनेट मा गुगल मी को हल्ला फैलियो, भलै अहिले त्यो ‘टविट’ भने, उनले मेटिसकेका छन् ।
केभिन कै कुरामा सहमति जनाउँदै, फेसबुक का पुर्वअधिकारी डि एङ्गलो ले पनि, ‘गुगल मी’ हल्ला नभइ, वास्तव मै ‘गुगल मी’ आउँदैछ र अहिले धेरै जना ‘गुगल मी’ मै काम गरिरहेकाछन् भनेपछि, इन्टरनेट मा ‘गुगल मी’ को कुरा ले तरंग नै पैदा गराएको छ ।
एङ्गलो ले भनेका छन्, फेसबुक को बढ्दो लोकप्रियता र प्रयोग सँगै, गुगल झस्किएको छ र आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न, गुगल सोसल नेटवर्क ‘गुगल मी’ बनाउन चाहन्छ ।
फेसबुक को डर
सर्च मा ख्याति कमाएको गुगललाई अहिले फेसबुक को डर ले छोपेको छ । फेसबुक को ‘लाइक बटनहरु’ ५० हजार भन्दा बढि साइटहरुमा प्रयोग भएको छ । फेसबुक ले, तिनै ‘लाइक बटनहरु’ को माध्यमबाट इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरु को रुचि बटुलिरहेको छ ।
लाइक बटनहरु का माध्यम बाट ‘फेसबुक’ ले जम्मा पारेको डाटाहरु बाट फेसबुक ले ‘शक्तिशाली’ सर्च इन्जिन को निर्माण गर्न सक्छ । लिंक को आधार मा गुगल ले सर्च इन्जिन को निर्माण गरेको छ भने, फेसबुक ले ‘लाइक’ का आधार मा सर्च इन्जिन बनाउन सक्छ । फेसबुक ले यस किसिम को सर्च बनाउन सक्छ कि, उसले इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरु को ‘रुचि’ र ‘ईच्छा’ अनि चलिरहेको ट्रेन्ड हेरेर नतिजाहरु दिन सक्छ ।
फेसबुक ले यो कदम चालेमा, गुगललाई ठूलो क्षति हुने देखिन्छ । फेसबुक मा हुने व्यक्तिगत ‘तथ्याङ्क’ को आधार मा, फेसबुक ले, गुगल को भन्दा निकै सरल अनलाईन विज्ञापनहरु प्रसारण र प्रयोग गर्न सक्छ । सरल यस अर्थ मा कि, मान्छे को रुचि बुझेर, त्यही किसिम को विज्ञापन प्रसारण गर्न सक्छ ।
अनि यदि, फेसबुक ले सर्च इन्जिन र विज्ञापन दुवै नेटवर्क निर्माण गर्यो भने, सबैभन्दा ठूलो घाटा गुगललाई हुनेछ । आफ्नो आम्दानी को ठूलो हिस्सा, गुगल ले गुमाउनेछ ।
हुन त, फेसबुक ले यस्तो कदम चालेमा, गुगललाई मात्र नभइ धेरै कम्पनीहरुलाई घाटा लाग्नेछ । साथै, फेसबुक को अर्को विकल्प नहुँदा, प्रयोगकर्ताहरुलाई मन नलागि-नलागि पनि फेसबुक नै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता आउनसक्छ । साथै, फेसबुक को मनोमानी पनि बढ्ने देखिन्छ ।
हालैका विगत मा फेसबुक का ‘प्राइभेसी’ सेटिङहरु बाट इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरु ‘प्राईभेसी’ का बारेमा जागरुक हुन थालेकाछन् । तर अहिले सम्म फेसबुक को अन्य विकल्प देखिएको पनि छैन । माइस्पेस दिक्क लागे, या हाइफाइभ दिक्क लागे, मान्छेहरु अहिले फेसबुक नै छिर्छन् । अनि मन परेपनि, मन नपरेपनि, दिक्क लागे पनि, फेसबुक चलाउनै पर्ने जस्तो बाध्यता बनिरहेको छ । फेसबुक बाट दिक्क भएकाहरु लाई एउटै मात्र विकल्प छ, फेसबुक एकाउन्ट ‘डिलेट’ गरिदिने !
गुगल को सोसल हुने फड्को
गुगल ले चालेका हालसम्म का सबै सोसल हुने कदमहरु सबै ‘फेल’ भएका छन् । ब्राजिल र भारत मा अत्याधिक प्रयोगकर्ता भएको ‘अर्कुट’ ले सफलता पाउन सकेको छैन । त्यस्तै ‘फेसबुक कनेक्ट’ को विकल्प को रुपमा आएको ‘गुगल फ्रेन्ड कनेक्ट’ ले पनि कुनै सफलता हात पार्न सकेन ।
त्यस्तै गुगल को ‘वेभ’, एक चोटि तरंग ल्याएर बाहिरियो । अनि गुगल बज, जसले फेसबुक, ट्विटर सबैको जस्तो काम गर्थ्यो, त्यो गुगल बज पनि, ‘फेल’ भयो । साथै ‘गुगल बज’ बाट प्राइभेसी तोडिएका कारण, गुगल ले धेरै आलोचना पनि खेप्नुपर्यो ।
गुगल जो, सानो भन्दा सानो कुरा पनि खोज्न सक्छ, सर्च को दुनियाँ मा अधिपत्य जमाएको छ । तर जब सोसल हुने, अर्थात सामान्य भाषामा भन्दा, ‘सामाजिक’ हुने कुरा आउँछ, गुगल सँधै फेल हुन्छ । ‘अलगोरिदम – स्ट्राटिजि – पोलिसी’ लाएर गर्ने काम गुगल सजिलै गर्छ तर जब प्रयोकर्ताहरु सँग सोसल हुन खोज्छ, गुगल धेरै ठाउँ मा चुक्छ ।
गुगल का पक्ष मा
सामाजिक संजाल मा धेरै पटक धोका खाइसकेको गुगल ले, यस पटक ‘गुगल मी’ बाट तहल्का मच्चाउन सके धेरै हदसम्म, सोसल नेटवर्क को एकाधिकार तोडिन्थ्यो भने प्रयोगकर्ताहरु ले ‘फेसबुक’ भनेर मात्र बस्नु पर्दैनथियो । यदि गुगल ले ‘गुगल मी’ बाट फेसबुक का आधि प्रयोगकर्ताहरु पनि तान्न सक्यो भने, ‘फेसबुक’ ले पनि आफ्नो प्रतिस्पर्धि पाउँथ्यो । जब प्रतिस्पर्धा हुन्छ, तब प्रयोगकर्ताहरु फेसबुक नै चलाउनु पर्ने बाध्यताबाट मुक्त हुन्थे ।
यदि यसो भए मा, गुगल मात्र होइन, सम्पुर्ण ‘वेव’ कै जित हुन्थ्यो । किनकी मान्छेहरु फेसबुक बाट केही हदसम्म थाकिसकेकाछन् । तर पनि फेसबुक को विकल्प नहुँदा, ‘खाए खा, नखाए घिच’ को अवस्था सिर्जना भएको छ । मन नलागेरै या भनौँ दिक्क लागेर पनि फेसबुक नै चलाउनु पर्ने बाध्यता छ ।
एसएफ विक्ली ले पछिल्लो ब्लग मा लेखेको छ, सम्भवत: अक्टोबर २०१० सम्म मा ‘गुगल मी’ सार्वजनिक हुने छ ।
वेभ, बज, अर्कुट मा फेल भएको गुगल को ‘गुगल मी’ पनि हेरिहालौँ न त ! ‘गुगल मी’ लाई सफलताको अग्रिम शुभकामना !!!
स्रोत: टेक ब्लग । सिएनएन । एसएफ विक्ली
फोटो : एसएफ विक्ली
Unknown July 2, 2010 at 1:59 AM
फेसबूकले जिन्दगी र समय डामाडोल पारिसक्यो, अब अरु बुकहरु निस्के भने झन के होला हालत ?
S July 2, 2010 at 1:02 PM
Interesting post...and very much informative too
गोकुल ढकाल November 12, 2010 at 4:03 AM